Beauty iyo caafimaad Bangiga Piggy ee cuntada cuntada
Beeraley kasta ama milkiilaha xitaa dhul yar oo dhul ah waa yaqaanaa dekedda. Dhirta cirridka leh ee caleemaha yar yar iyo caleenka duurjoogta ah waa mid aad u adag in laga baxo, sidaas awgeed waxaa loo tixgeliyaa caws. Si kastaba ha ahaatee, waa inaadan ku degdegin inaad tuurto beerta biyaha la dhigto - guryaha sifooyinka ee geedaha ayaa badbaadin kara cuduro badan waxayna xoojinayaan habka difaaca jirka.
Qalabka daawada ee haramaha
Maaddaama ay tahay walxo cayriin ah farmashiga, qaybta anteenada iyo miraha dhirta la tilmaamay ayaa la isticmaalaa. Waxay qiimeeyaan sababo kala duwan oo kiimiko ah, kuwaas oo ay ka mid yihiin:
asiidhyada dabiiciga ah;
dufan iyo faybarro carab ah oo carbuunik ah;
xeryahooda yaryar ee ka kooban;
fitamiinada kooxda B, E, C, K iyo PP;
dib u noqoshada.
Isku daridda qaybahan waxay bixisaa saameynaha daaweynta ee soo socda ee isticmaalka geedkan:
Sidoo kale, diyaargarowga dhirta la tixgeliyo waxay leedahay saameyn ku yeelashada hypoglycemic. Guryahan daaweynaya ayaa go'aamiya ka mid noqoshada beerka ee cuntada ku jirta sonkorowga. Isticmaalkeeda waxay ka qayb qaadataa hoos u dhac degdeg ah oo joogto ah oo ku yimaada diirada sonkorta ee dhiigga .
Waxaa xusuus mudan in weedka la sharraxay uu yahay hoggaamiyaha ka mid ah dhirta noocan oo kale ah ee ku jira maaddooyinka mucous. Waxay ka caawiyaan oo keliya in ay si wax ku ool ah ula qabsadaan caloosha, laakiin sidoo kale si dhakhso ah u joojiso geeddi-socodka bararka ee xiidmaha iyo kaadiheysta, iyo sidoo kale joojinta dhiig-bax yar. Sidaa darteed, ka mid ah hantida daawooyinka beeraha beerta ee haweenka, waxaa muhiim ah in la sheego waxtarkeeda ka yimaada cagaarshowga iyo dildilaaca malawadka, iyo sidoo kale daaweynta cystitiska . Badanaa, warshadaan waxaa lagula taliyaa sidii gargaar loogu talagalay daaweynta cudurrada jeermiska kaadida.
Cunnooyinka si loo isticmaalo sifooyinka guryaha ee daawada porcloak
Dhakhaatiirta dadweynaha waxaa lagula talinayaa inay isticmaalaan decoctions iyo infusions ee geedo soo bandhigay. Isku diyaarinta naftaada waa mid sahlan.
Cuntada maraq ah
caleemaha la jarjaray iyo cawska dekedda - 1 tbsp. qaaddo;
Karkari qalabka wax lagu maydhay ee ku jira mugga biyaha la dhigo 10 daqiiqo, ka bax laba saacadood, ka dibna adkee.
Recipe for faleebo
geedo la qalajiyey (caleemo, afkoda, ubaxa) ee dekedda - 1 tbsp. qaaddo;
Iyada oo biyo karkariya, dhoobo phytochemicals, daboolo weelka leh xabo ama dabool oo u oggolow in xalka si ay u dhajiyaan for 60 daqiiqo, ka daadi.
Mid kasta oo ka mid ah miisaaniyadda la helay waa in la qaato 1-2 saac. malqacadaha 2-3 jeer maalintii muddo aan ka badnayn 7 maalmood. Sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa dibedda - xoqin, ka samee wejiyo iyo cadaadis.
Khilaafaadka isticmaalka alaabta daawooyinka iyo ficillada qofka guriga u galaya
Adoo tixgelinaya awooda warshad si ay u kordhiso cadaadiska wadnaha sababtuna tahay nuxurka noradrenaline, diyaargarowga waa inaan la qaadin noocyada noocaas ah:
garaaca wadnaha oo hooseeya (bradycardia);
u ekaanshaha cudurada dhirta;
marxalad ama marxalad joogto ah ee suuxdinta qallafsan;
Sidoo kale, ha la tijaabin haweenka uurka leh, hooyooyinka kalkaaliyaha ah iyo dadka leh xasaasiyado badanaa xasaasiyadeed.
Saliid muhiim ah oo ah saliida
Osteoporosis - daaweynta daaweynta dadweynaha
Nadiifinta xididdada dhiigga leh daaweynta dadweynaha
Yamaaruggii Caanaha - guryaha dawooyinka
Cunnooyinka nafaqada ee qufaca iyo boronkiitada
Daaweynta daawada arthrosis daaweynta dadka
Maxay faa'iido u tahay saladhka rucola ee jidhka bini'aadamka iyo waxa fitamiinada ay ka kooban tahay?
Miyuu suurtagal ah in la dhigo gasacadaha boronkiitka?
Cagaarka yaryar ee caanaha - guryaha lagu daweeyo iyo ka hortagga
Karkare shaah - guryaha faa'iido leh
Saliid foornada sanka
Goorta la ururiyo burooyinka bjørka?
Tincture of Calendula laga bilaabo Acne
Joodariga dabiiciga ah ee dabiiciga ah
Muxuu eeyga u shaqeynayaa?
Mousse for timo styling
Labadan mataanood oo leh midab kala duwan oo maqaarka ah ayaa afduubay dhammaanba qalbiyada internetka!
Samee cabitaanka casiirku waa mid wanaagsan oo xun
Palace Royal (Brussels)
Waa maxay bitcoin - shaqada qajaar la'aanta ah oo aan ku lifaaqan mashiinka
Miyuu suurtogal ah in uu ku-tallaalaan dhirta dayrta?
Dharka quruxda badan ee ballaadhan
Priscilla Presley ayaa faallo ka bixisay fadeexad kufsiga oo ku hareereysan musuqmaasuqa gabadheeda
Kaadi-saaridda kaadiheysta ee haweenka
Muxuu yahay mandheerta loo yaqaan booska carruurta?
Fibroadenoma ee naaska - daaweynta
Xiddiga filimka "Twilight" wuxuu isku dayay sawirka Coco Chanel oo weyn